कमेरो र कमिज - Fonij Korea
लेखक: गोकुल थोकर | प्रकाशीत मिति: October 15, 2021
पूर्वतिरबाट घाम हिमाल हुँदै हाम्रोमा आउँथ्यो । भरखर लगाएको कमेरो र रातो माटोले लिपेको घर चमक्क चम्किन्थ्यो । मानौं मलाई चुनौती दिएको हो ।
‘ओई काले तैंले लाएको सेतो पोलिस्टारको कमिज सुरुवाल भन्दा त मलाई सुहाएको छ । हेर त म कति चिटिक्क छु ।’
हो पनि चिटिक्कै छ । नहोस पनि किन ? आमाले पल्लो पाखाबाट कमेरो खनेर ल्याउँथिन् । पल्लो पाखा पुग्नलाई झन्डै एक घन्टा हिड्नु पर्ने । जाँदा अलिकति तेर्सो छ । त्यस पछि ओरालै ओरालो । आउँदा उकालै उकालो हुने भैगयो । आमा कमेरो खन्न विहानै जान्थी । काकी पनि जान्थिन् । आफ्नै घरको लागि कमेरो ल्याउन । हामी दाजुभाइ दिदी वहिनीको टोलीको घरमा के काम ? आमाका पछि लागिन्थ्यो ।
‘कमेरो । माटोको राजा हो । आमा भन्थिन । जहाँ पायो त्यही हुने हो र ?’ हो पनि । धेरै त कालो माटो छ, बलोटे माटो छ । कहाँ पाईन्छ र सेतो माटो ? हो राजै हो । आमाको कुरामा दम छ ।
‘मान्छे पनि त्यस्तै हो । असल र राम्रो मान्छे जता ततै पाईदैन ।’ आमाले भनेको दोस्रो कुरा बुझ्दै बुझ्दैन थिएँ । मान्छे उस्तै हैनन् र ? कहाँको कमेरो कहाँको मान्छे ।
कमेरो खन्ने ठाउँ अप्ठ्यारो थियो । सानो ढिस्काको मुनी । अलि तल सिम छ । पानी भुलभुल निस्किन्छ । कमेरो खन्ने ठाउँ पनि ओसिलो छ । अन्त ठाउँको जस्तो मान्छेहरु हाम्रो कमेरो खन्ने ठाउँमा छैनन् । किनकी त्यो हाम्रो आफ्नो नीजि हो । नत्र त पालो कसरी पाइन्थ्यो होला र ? हाम्रै मात्र भए पनि राती राती मान्छे कमेरो लैजान्छन् । आमा कहिले कही यसरी लैजानेलाई गाली गर्छिन् ।
कमेरो, मुस्किले ज्यान छिर्ने ठाउँमा छ । सानो कुट्टोले विस्तारै विस्तारै खन्नु पर्ने । हाम्रो बाजेकै पाला देखि नै यही बाट लैजाने गरेको रे । खन्दा खन्दा कता हो कता गहिरो भैसकेको छ । हेर्दै डर लाग्दो । म दशै छेका कमेरो खन्दा मान्छे पुरिएको समाचार आक्कल झुक्कल सुन्छु । मन झसंग हुन्छ ।
हामी रमिते सन्तान छौं । आमा र काकी पालो पालो सानो कुट्टोले कमेरो अलि अलि गर्दै खनेको छ । बाहिर हुने हामी जम्बो टोली त्यसलाई बोरामा हालेको छौं । घाम तात्दै जान्छ । कमेरोको बोरा भरिदै आउँछ । आमाको लुगा, अनुहार, जीउ भरि नै कमेरोले सेतै हुन्छ । हुन त हामी पनि हुन्छौं । हामी रमाइलोको लागि ।
‘यति भए पुग्छ ।’ आमा कमेरोको बोरा हेरेर अनुमान लगाउँछिन् ।
कमेरोको माटो न पर्यो । आम्मा हो कति गह्रुङ्गो छ । म कमेरो भरिएको बोरा हल्लाउन खोज्छु । चलाउन सके पो । आमा नाम्लो लाउँछिन ।
‘मिलेर बोरालाई घचेट त ।’ हामी एक जत्था मिलेर पछाडीबाट बोरालाई आमाको ढाडमा हुत्याउने खोज्छौ । आमा बल लाउँछिन ।
उकालो बाटो । कमेरो बोकेर आएको पसिना पुछेर आमाको अनुहार कुनै कमेडी क्लबमा हसाउने जोकरको भन्दा कम हुँदैन । दुःखले कमेरो घर पुग्छ ।
‘बाई आस्याङ’ छन् हामीलाई सहयोग गर्ने । मेरो मामाको मित अरे । मामाको मित पक्का मामा । उनी नेवार हुन् । तामाङ भाषामा बाई भनेको नेवार । त्यसैले उनी नेवार मामा अर्थात ‘बाई आस्याङ’ । उनै आस्याङको काम हो घरमा कमेरो लाई दिने ।
घर दुई तल्ले छ । माथिल्लो तल्लामा भर्याङ लाएर कमेरो लाउनु पर्छ । तल्लो तलामा पर्दैन । कमेरो पानीमा घोल्यो । बाबियोको कुचो बनायो । पानीमा घोल्यो । त्यही कुचोले कमेरो छ्याप्ने । तीन भागको एक भाग त ढुङ्गै छ । मुले कमेरोमा ढुङ्गै ढुङ्गा हुने रहेछ । गह्रुङ्गो नभएर के होस् ?
आस्याङ छ्याप छ्याप कमेरो दिनै भरि लगाएर लाई दिन्छन् । घर वरिपरि कमेरोको सेतै सेतो ।
कमेरो सुख्खा भए पछि पेटी र आँगनमा रातोमाटो प्रयोग हुन्छ । यो माटो घरै अघि छ । जति खेर चाहियो । ल्यायो ।
यत्रो मेहनत खाएको घर किन नराम्रो हुनु ?
मेरो पोलिस्टरको कमिजको कथा कमेरो र रातो माटोले चम्किएको घरको जस्तो छैन । बाले धेरै सन्तानलाई एकै थानबाट मिटरका मिटर कपडा किन्दिन्छन् । पसले कति बर्षको मान्छे छ त्यही अनुसारको कपडा कति मिटर चाहियो काटि दिन्छन् ।
बा डोरी ल्याउँछन् । हात यति लामो । सुरुवाल यति लामो । कमिज यति लामो । उनी डोरीमा गाँठो बनाउँछन् । फिटिङ साईजको भन्दा लामो ।
हाम्रो लुगा सिलाउने दमाई बाजे छन् । पाका उमेरका । ज्यान खाई लाग्दो छ । दशै छेका उनी कपडामै पुरिएका हुन्छन् । कसको के सिलाउनु ? कतिको सिलाउनु ?
‘विष्टहरुलाई खुशी पार्न मैले हिजो बति बालेर राती अबेरसम्म सिलाएको ।’ बासँग गुनासो गर्छन ।
‘यो दशै त हाम्रो लागि दशा नै हो ।’ होला पनि । हाम्रो कपडा ती बाजेले एकै दिनमा कहिल्यै सिलाएर दिदैनथे । दुई तीन दिन लाएर हुन्थ्यो । कसैको कमिज छ । कसैको सुरुवाल । सेट नै तयार हुने त भाग्यमानी भैहाल्यो ।
मेरो लुगा तयार भयो । लायो आफ्नो ज्यानमा ठीक हुने खालको एउटा पनि छैन । कमिजको बाहुला लामो छ । सुरुवाल पनि त्यस्तै । मेरो लुगा दाइदाई दियो भने पनि ठिक्क हुने खालको छ । भाइको लुगा मलाई । बा र दमाई बाजे कुरा गर्छन ।
‘यो नाप भन्दा अलि ठूलो सिलाउनु के जेठा । बच्चाहरु हुरुक्कै बढ्छन् । एकै महिनामा ठीक हुँदैन लुगा ।’ दमाई बाजेका कुरा बाले नमान्ने कुरै भएन । त्यस्सै ठूलो नापेर लगेका झन ठूलो सिलाए पछि के हुन्थ्यो । जिन्दगीमा फिटिङ लुगा कस्तो थाहै नहुने । बस नयाँ लुगा त थियो । ती नयाँ लुगाका अर्कै बासाना आउँथ्यो । त्यसको आनन्द अर्कै थियो ।